Sucuudiga Oo Ku Qancisay Dawladda Soomaaliya Inay Joojiso Mucaaradada Ay Ku Hayso Maalgashiga Dp World Ee Dekedda Berbera – Ilays News
Sucuudiga Oo Ku Qancisay Dawladda Soomaaliya Inay Joojiso Mucaaradada Ay Ku Hayso Maalgashiga Dp World Ee Dekedda Berbera
Dawladda Sucuudiga, ayaa la sheegay inay ku qancisay dawladda Soomaaliya inay joojiso dagaalka mucaaradeed ee ay kaga soo horjeedo mashruuca horumarinta iyo casriyaynta dekedda Berbera ee DP world.
Wargeyska The Indian Ocean, ayaa cadadkiisii shalay qoray in Raysalwasaaraha Soomaaliya Xasan Khayre oo safar ku tagay dalka Sucuudiga maalmihii la dhagax dhigayay balaadhinta dekedda Berbera, uu boqorka dalka Sucuudiga Boqor Salmaan Bin Cabdulcasiis, maalin ka hor xafladii dekedda lagu balaadhinayay u bandhigay sida adag ee ay dawladiisu uga soo horjeedo maalgashiga DP world ee dekedda Berbera.
Laakiin boqorka Sucuudiga ayaa aakhirkii raysalwasaare Khayre ku qanciyay inuu joojiyo mucaaradada uu ku hayo maalgashiga DP world ee Berbera, “Iyadoo lagu bedelanayo caawimo dhaqaale oo lagu caawinayo dawladda Soomaaliya si ay u bixiso mushahaharka askarteeda iyo saraakiisha Booliska, wuxuu boqorka Sucuudigu u sheegay Xasan Cali Khayre inaanu farogelin maalgashiga Imaaraadka Carabta ee Somaliland ee balaadhinta dekedda Berbera.” Ayuu ku yidhi Wargeyska The Indian
Ocean warbixinta uu shalay qoray waxaanu intaas raaciyay, “Muqdisho,markaas way joojisay inay ku qayliso saxeexii 12 Oktoobar ee qandaraaska $ 101 milyan dollar ee dhex maray shirkadda Imaaraatiga ah ee ee Shafa Al Nahdah iyo wasiirka arrimaha dibadda Somaliland ee ku saabsanaa wejiga koowaad ee balaadhinta dekedda Berbera.” Ayuu yidhi wargeysku.
Ma jiro war madaxbanaan oo xaqiijinaya warbixintan uu shalay baahiyay wargeyska The Indian Ocean, laakiin raysalwasaaraha Soomaaliya ayaa ka soo laabtay socdaalkaas uu ku tagay dalka Sucuudiga.